AMISOM oo sheegay in ay fashilinayaan weeraro Al Shabaab ay la damacsan yihiin Goobaha Doorashooyinka – Somalia247
Muqdisho ( Mareeg)-Ururka Midowga Africa ayaa mar kale ku celiyey in Ciidamada Somalia ay kala shaqeyn doonaan dhinaca Sugida Amniga Dalka xilliga ay dhacayaan Doorashooyinka oo ku beegan bilaha soo socda.
Ku xigeen Wakiilka Midowga Africa ee Somalia Lydia Wanyoto ayaa xustay in Midowga Africa ay hada diyaarinayaan qorshaha sugida Amniga si looga hortago weeraro Al Shabaab ay ku qaadi karaan goobaha Doorashooyinka Dalka.
Wanyoto ayaa intaasi ku dartay in iskaashi wanaagsan in uu dhex maro Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Somalia ay ka dhigantahay in laga hortagi karo weerarada Al Shabaab ayna doonayaan in ay ku carqaladeeyaan Doorashooyinka Somalia.
Taliyaha Ciidamada AMISOM ee Somalia Gen Cismaan Subagle oo ka qayb galay kulan looga hadlayey xoojinta Amniga dalka ayaa xusay in ay diyaarinayaan qorshooyin cusub oo ku fashilinayaan duulaano ka yimaada dhinaca Al Shabaab oo dirir xoogan kula jira Dowladda Somalia iyo Ciidamada ka socda Midowga Afruca ee ku sugan Somalia.
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan ka codsaday Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Somalia in ay wax ka qabtaan Amniga goobaha ay ka dhacayaan Doorashooyinka dalka.
More from my siteCaburin kuma heyno Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan”.Qaraxyo Qasaaro geestay oo saakay ka dhacay magaalada MuqdishoCiidamada DFS, Kenya iyo kuwa Ajaaniib ah oo Weerar ku qaaday Xarumaha Al Shabaab
PreviousDaan daansi la sheegay in ay wado Somaliland oo laga digay iyo Fariin loo diray Dowladaha Dariska
NextAU to deter Al-Shabaab from disrupting Elections